Mamwe Ceramic Mould uye Product
ZVIMWEWO Ceramic muforoma AND PRODUCT
Kuvandudza unhu uye kuderedza mari By yekudyidzana kuderedza kuunganidza sulfate, zvinokwanisika kuti vabudirire kuvandudzika munzvimbo kunaka girazi uye zvinoderedza ari chinyorwa mwero sezvo zvichienzaniswa simbi chinotenderera. The fused silica chinotenderera ane zvikuru pasi chafariz conductivity uye ndiyo yakanakisisa sarudzo nokuti nokudzora annealing muitiro, ichiita shoma-deformation girazi pasina microcracks uye pasi kushushikana kana kunyange magirazi Ribbon. · Smooth pamusoro, nyore kubata gaba kana gaba oxide The fu ...
Nesilicon simbi pasi annealing chinotenderera
Anoshandiswa kbps nesilicon simbi jira Kugadzirwa nesilicon simbi annealing rollers vari akakodzera vachirayira annealing pezvakaitwa akadai simbi mukugadzira. Rinoshandiswa kutakura nokushanda annealing mukuru tembiricha nesilicon simbi papepa, uye tembiricha siyana ndiyo 600-950 ° C. Tafura chinotenderera akagadzirirwa kusangana muitiro zvinodiwa uye rinoshandiswa pachiimbwa Kamroller kwakaita proprietary patented mugodhi magumo michina, nechokwadi kumeso uye oneka pakusununguka. Uye pamusoro pemvura R ...
Fused Silica Roller kuti motokari zvikamu anneal ...
Munguva motokari indasitiri, Kamroller anopa zvakawanda zvakarurama zvinoriumba uye zvigadzirwa. Nokuda mukuru simba zvemaziso uye zvakaisvonaka wethermodynamics uye nemagetsi zvivako zviri Ceramics, motokari vanogadzira repair zvikamu vagadziri vari kuramba vachishandisa zvedongo zvinhu panzvimbo simbi. Tinoshanda vatengi vedu kukudziridza yakavimbika, Zvinokosha zvakaisvonaka uye vakaderera mutengo zvinoriumba. We kugovera rollers kuti tsika yamavira uye motokari zvikamu, kubudisa lightweight motokari zvikamu t ...
Automotive vakafugama vanoumba muforoma
High Chakachena Fused Silica Raw Material
KAMROLLER® ndiyo nyika vaitungamirira akaigadzira yepamusorosoro Ceramics kubva 1988. MuUnited States uye China, mafekitari nemasangano anopa unhu zvinhu uye mabasa vatengi pose.
Shanghai Road, Xinyi Economic - muruzivo rwokugadzira Development Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province, China
7 Days pavhiki kubva 9:00 am kusvika 6:00 pm
For kubvunza pamusoro zvinhu zvedu kana pricelist, ndapota siya email nesu uye isu tichava nekuonana mumaawa 24